Bogga ugu weyn Waa maxay Nambarka Wadista oo halkeed ka heli kartaa?
Ururka Bangiyada Mareykanka (ABA) ayaa sameeyay nambar marin si ay uga caawiso dib u habeynta isdhaafsiga jeegaga warqadaha ee miisaan la taaban karo. Waxaa si weyn loogu yaqaanaa nambarada marinka ABA ama nambarada marinka guriga ee American Clearing House (ACH). Haddii aad jeclaan lahayd inaad wax badan ka ogaato nambarada dariiqa, markaa, maqaalkani adigaa iska leh.
Waa maxay Number Routing Number?
Nambarka dariiqa waxa uu ka kooban yahay kood sagaal lambar ah oo loo isticmaalo in lagu aqoonsado hay'adaha maaliyadeed ee kala duwan ee Maraykanka. Taasi waa, hay'ad kasta oo maaliyadeed waxay leedahay mid loo qoondeeyay.
Si aad u noqoto mid wax ku ool ah, waxay door muhiim ah ka ciyaartaa hubinta in lacagtaadu ku timaado meesha saxda ah. Sidaa darteed, markaad la gasho lambarka xisaabta lacag-bixiyaha, waxay kuu fududaynaysaa inaad aqoonsato akoontiga saxda ah ee xawaaladdaada.
Intaa waxaa dheer, nambarada marinka waxaa isticmaala bangiyadu si ay u hagaan sarifka lacagaha dhexdooda. Markaad hubiso dhanka bidix ee hoose ee jeegaga gaarka ah, waxaad heli doontaa lambarada dariiqa. Ka sokow, bangiyada waaweyni waxay yeelan karaan nambaro badan oo dariiqa ah.
Si taas loo gaaro, lambarka aad u baahan tahay waxaa go'aamin doona gobolka laga furay akoontada. Sidoo kale, bangiyada yaryar waxay caadi ahaan yeelan doonaan hal lambar oo bangi ah.
Mar haddii bangigu yeelan karo dhowr lambar oo ka mid ah, waa inaad xaqiijisaa in nambarka dariiqaadu ku dhereran tahay bangiga saxda ah ee aad ka furtay akoonkaaga.
Halkeed ka heli kartaa Lambarka Wadista?
Helitaanka mid waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fudud ee aad samayn karto. Markaa, haddii aad hubiso dhanka bidix ee hoose ee jeegagaaga, waxaad heli doontaa lambarka. Taasi waa haddii aad leedahay xisaab bangi Maraykan ah.
Sidoo kale, marka aad hesho lambarkaaga dariiqa, waxa ku xiga lambarkaaga akoontiga. Si uu lacag-bixiyuhu u helo nambarkiisa dariiqa, waa inuu galo bangiga internetka ee uu leeyahay.
Waxa aad u xiiso badan, lambaradani maaha kuwo sir ah ama qarsoodi ah, sidaa darteed, haddii ay kugu adkaato helitaanka lambarkaaga dajinta ee jeegaaga, shabakada bangiga ayaa noqon doonta meel kale oo aad tagto. Caadiyan, bangiyadu waxay ku daabacaan nambaradooda marinka shabakadooda.
Bayaanka bangiga waa meel kale oo aad ka raadin karto lambarkaaga haddii aadan haysan wax jeeg ah. Lambarka dariiqa waa lambarka sagaal-god ee ku daabacan meel u dhow lambarka xisaabtaada.
Si kastaba ha ahaatee, haddii dhammaan xulashooyinka ay ku guuldareystaan, waxaad la xiriiri kartaa bangigaaga ama waxaad booqan kartaa laan ku dhow oo aad weydiiso lambarkaaga marinka.
Lambarka dariiqa iyo lambarka xisaabta
Dhaqaale kasta oo ka dhacaya bangiga wuxuu u baahan yahay laba lambar oo aasaasi ah si ay uga caawiyaan aqoonsiga macaamiisha. Kuwani waa nambarka dariiqa ama lambarrada xisaabta. Ka sokow, labadoodaba waxaa laguu qoondeeyay markaad furto akoonkaaga.
Haddii aad dhigato dhigaal toos ah (tusaale ahaan jeeg mushahar) ama aad jeegag ka dalbato online, waxaad u baahan doontaa nambarkaaga marinka iyo lambarkaaga koontada labadaba.
Nambarka akaawnkaaga waa sida aqoonsigaaga ama farahaaga gaarka ah ee adiga keligaa akoonka haysta ahaan. Isla mar ahaantaana, lambarka dariiqa ayaa kaa caawinaya inaad ku aqoonsato hay'ad kasta oo maaliyadeed oo leh aqoonsi nambareed oo gaar ah.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Adeegsado Moneygram -ka Aan lahayn Kaarka Aqoonsiga 2022 -ka
Mar kasta oo aad samayso xawilaad elektaroonig ah, waxaad u baahan doontaa inaad keento nambarada marinka iyo nambarada akoontiga si ay kaaga caawiyaan helida hay'ada maaliyadeed ee gaarka ah iyo qofka saxda ah ee wareejinta sanduuqa.
Sida Loo Helo Bangi Leh Lambarka Wadista
Haddii aad rabto inaad raadiso bangi adoo isticmaalaya nambarkiisa marin-u-socodka, shabakada ABA waxay noqon doontaa meel waxtar leh oo sidaas lagu sameeyo. Sidoo kale, markaad eegto bogga bangiga, waxaad geli kartaa magaca bangiga iyo ciwaanka si aad u hesho lambarka. Isla mar ahaantaana, waxaa suurtogal ah in lagu helo jeeggaaga oo aan magac bangi lahayn.
Si sax ah loo dhigo, nidaamka kaydka federaalku wuxuu socodsiin karaa macaamil ganacsi haddii ay helaan lambarka dariiqa bangiga iyo lambarka akoontiga. Sida ay xaaladdu tahay, waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso lambarkaaga akoontiga si la mid ah sida aad lambarkaaga nabadsugida u sameyso.
Maxaad ugu baahan tahay inaad ogaato nambarka dariiqa ee bangigaaga?
Waa muhiim in la ogaado lambarka dariiqa ee bangigaaga ama sida loo helo. Sababaha soo socda ayaa kugu filan inaad ogaato:
Waxay kaa caawinaysaa inaad dejiso deebaaji toos ah: loo-shaqeeyayaasha qaarkood waxay doortaan inay bixiyaan mushaharka iyagoo isticmaalaya jeeg. Isla mar ahaantaana, kuwa kale waxay bixiyaan dhigaal toos ah. Debaajiga tooska ah, waxaad si fudud u heli kartaa lacagtaada.
Waxba kuma kacayso in la sameeyo deebaaji toos ah taasina waa marka laga reebo xaqiiqda ah inay kaa badbaadin karto walaaca aadida bangiga.
Farsamo ahaan, si aad u hesho deebaaji toos ah, waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso foom, oo sheegaya meesha aad rabto in lacagtaadu aado. Shaki la'aan, lambarkaaga akoontiga kuma filna inuu siiyo loo-shaqeeyahaaga marka aad dejinayso deebaajigaaga.
Sababta ayaa ah in lambarada akoonku aanay ahayn bangi gaar ah. Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan doontaa inaad siiso nambarkaaga marin-u-socodka shaqo-bixiyahaaga si ay awood ugu siiso inay aqoonsadaan bangigaaga marka aad dhigayso jeegaga mushaharka.
Waxay kaa caawinaysaa inaad si sahal ah lacag ugu kala xawisho bangiyada: marka aad lacag ka wareejinayso bangi una wareejinayso mid kale, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso lambarka bangigaaga. Lambarka dariiqa ee bangigaaga, waxay awood u siin doontaa bangiga in si fudud loo aqoonsado.
Sidoo kale, mid ka mid ah shuruudaha lagu furayo xisaab hubin ama kayd online, waa inaad keentaa nambarkaaga dariiqa, oo ay la socdaan lambarkaaga akoontada si ay kuugu suurtagasho inaad si guul leh ugu wareejiso lacagaha u dhexeeya xisaabaadka.
Waxaad heli kartaa deebaaji soo celinta cashuurta: in jeeg lagugu soo celiyo cashuurtu waxay qaadan kartaa todobaadyo. Natiijo ahaan, dad badan ayaa doorbidi lahaa in lacagtooda canshuur celinta si toos ah loogu shubo akoon bangi. sidaas darteed, waxaad u baahan doontaa inaad keento lambarkaaga dariiqa iyo lambarka akoonkaaga si aad u hubiso in dowladdu ay lacagtaada ku shubto akoon sax ah.
Waxay awood kuu siinaysaa inaad biilashaada ku bixiso khadka: maadaama amaah-bixiyeyaal badan iyo deyn-bixiyeyaal ay bixiyaan lacag-bixinta onlaynka ah, waxaad ku bixin kartaa biilashaada onlayn ama waxaad dejisan kartaa lacag-bixin toos ah si aad u fududayso maamulka dhaqaalahaaga. Deyn bixiyeyaasha qaarkood waxay u ogolaadaan dadka akoonnada haysta inay dejiyaan lacag-bixinno toos ah iyagoo isticmaalaya kaarka deynta ama kaarka bangiga.
XIDHIIDHKA: Maxay Tahay Kaarka Amaahdu Sideese U Shaqaysaa? | Tilmaan dhamaystiran
Dhanka kale, waxaad samayn kartaa lacag bixinta ACH, oo aad si toos ah lacag uga samayn karto akoonkaaga bangiga. Sidaa darteed, waxaad u baahan doontaa inaad keento lambarkaaga dariiqa bangiga iyo lambarka akoonkaaga.
Waxay kaa caawinaysaa inaad samayso xawilaad siligga: haddii aad u baahan tahay inaad lacag u dirto sida ugu dhakhsaha badan, waxa laga yaabaa inaad isticmaasho xawilaadda siligga hal bangi una guurto mid kale. Tani waxay qaadanaysaa wakhti ka yar wareejinta ACH. Intaa waxa dheer, waa in aad keentaa nambarkaaga marinka iyo lambarka akoontiga iyo sidoo kale kuwa qaataha.
Akhri ASida Loo Adeegsado Moneygram -ka Aan lahayn Kaarka Aqoonsiga 2022 -ka
Suurtagal ma tahay in Nambarada Dariiqa Bangigu isbedelaan?
In kasta oo bangi kastaaba leeyahay ugu yaraan hal nambar oo marin ah, qaar ka mid ahina badanaa waxay leeyihiin nambaro kala duwan. Sidoo kale, bangiyada kasta lambarradiisu way ku kala duwan yihiin bangiyada dhexdooda, si la mid ah waxay u kala duwanaan karaan gobol ahaan. Tusaale ahaan, lambarka wareejinta bangiga California waxaa laga yaabaa inaysan la mid ahayn laanta bangiga Ohio.
Intaa waxaa dheer, noocyada kala duwan ee wax kala iibsiga ee bangiga dhexdiisa waxay yeelan karaan nambaro kala duwan. Sidaa darteed, marka aad shaki gasho, waxaa laga yaabaa inaad la xiriirto bangigaaga si aad u xaqiijiso inaad isticmaalayso lambarka saxda ah ee dhigaalka tooska ah, lacagaha ACH, xawilaadda siliga, iyo kuwa kale.
Waxa kale oo aad lagama maarmaan u ah in la ogaado in bangiyada iyo ururrada dayntu ay sidoo kale isbeddeli karaan wakhti ka waqti. Tani waxay badanaa dhacdaa marka hay'ad maaliyadeed ay ku biirto mid kale, ay beddesho sababta lambarka dariiqa, ama ay u baahan tahay inay abuurto lambaro cusub oo ku saabsan noocyada kala duwan ee wax kala iibsiga.
Natiijo ahaan, way wanaagsan tahay inaad si joogto ah u xaqiijiso in lambarkaaga dariiqa aanu isbeddelin. Haddi ay isbedesho oo aadan ka warqabin, waxa laga yaaba in aad is aragto adiga oo isticmaalaya nambarka dariiqa qaldan marka aad lacag dhigayso dhamaadkana waxa laga yaaba in ay sidaas ku gasho akoon bangi khaldan.
Ma u baahan tahay Lambarka Wadista si aad Lacag ugu wareejiso Mareykanka?
Hadday tahay lacag-bixin gudaha Maraykanka ah ama xawaaladaha waddan kale, waa inaad isticmaashaa lambarka dariiqa si aad awood ugu yeelatid wareejinta. Sababta ayaa ah in nambarka dariiqa uu kaa caawinayo inaad hesho bangiga gaarka ah ee ku yaal Mareykanka kaasoo heli doona lacagta.
Nooca xawilaadda lacagta aad samaynayso waxa laga yaabaa inay saamayn ku yeelato lambarka dajinta ee aad isticmaali doonto. Waxaa jira nambaro kala duwan oo kala-wareeg ah oo loogu talagalay wareejinta siliga iyo ACH. Sidoo kale, bangiyada inta badan waxay door bidaan wareejinta siligga, si kastaba ha ahaatee, bangiyada qaar (sida caadiga ah Bangiyada Qarniga ah) ama ururrada deynta yaryar waxay aqbali doonaan oo keliya ACH.
Intaa waxaa dheer, wareejinta siligga ee lagu sameeyo bangiyada khadka tooska ah ama aaladda FX waxay u baahan kartaa nambar marineed oo ka duwan lambarka dajinta ee jeegga. Taasi waa sababta ay tahay in aad isku daydo in aad laba jeer hubiso lambarka lacag-bixiyaha ka hor inta aanad lacag wareejin.
Arag sidoo kale: Bangiyada ugu Fiican Houston 2022| Heerarka, Noocyada Xisaabaadka, Min. Deposit
XIDHIIDHKA: Dulmarka Maalgelinta Rabitaanka: Sida ay u shaqayso
Waxa laga yaabo inaadan ka ogeyn nambarada marinka bangiga
Lambarka marinka bangiga waxaa markii ugu horreysay sameeyay 1910kii Ururka Bangiyada Mareykanka (ABA).
Bangi kastaa waxa ay u badan tahay in uu haysto ilaa afar nambar oo dariiqa ah, marka laga reebo lambarka weyn.
Guddiga maamulka ee Nambarka Dariiqa ee ABA ayaa mas'uul ka ah u qorida nambarada marinka bangiyada gaarka ah.
Nambar kasta oo sagaal-god ah wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood. Waxay kala yihiin:
1. Astaanta Dariiqa Kaydka Federaalka: Tani waxay ka kooban tahay afarta nambar ee ugu horreeya lambarka dariiqa. Haddii labada nambar ee ugu horreeya nambarkaas dariiqa ay yihiin 00, taasi waa calaamad muujinaysa in nambarka dariiqa uu yahay hubin ama qabyo ka yimid Dowladda Mareykanka.
Intaa waxaa dheer, bangiyadu waxay isticmaalaan nambarada dariiqa ee ka bilaabma lambarada ugu horreeya ee 01-12, halka tirooyinka bixista ee jeegaga socdaalku ay ka bilaabanayaan 80. Xaaladaha kale, labada nambar ee hore ee soo hadhay ayaa loo qoondeeyey 'isticmaalka mustaqbalka' iyo kuwa ABA's Routing Nambarka guddiga maamulka ayaa saameeya.
2. Aqoonsiga hay'adda ABA: Tani waxay ka kooban tahay afarta lambar ee soo socota waxayna gaar u yihiin aqoonsiga bangiga ama hay'adda maaliyadeed ee saxda ah.
3. Hubi digit: Tani waxay ka kooban tahay tirooyinka ugu dambeeya waxayna ka caawiyaan bangiga inuu ka fogaado nooc kasta oo khalad ah inta lagu jiro wax kala iibsiga.
#1 Muxuu kuu sheegayaa lambarka dariiqa?
Nambarkaaga dariiqa ayaa kaa caawinaya inaad aqoonsato goobta laga furay akoonkaaga. Lambarka dariiqa sidoo kale waxaa loogu yeeri karaa lambarka ABA ama RTN.
#2 Ammaan ma tahay in aad qof siisid lambarkaaga dariiqa iyo lambarkaaga xisaabta?
Jawaabtu waa haa. Laakin waxaa laga yaabaa inaysan ammaan ahayn in sidaas la yeelo, inkastoo lambarkaaga dariiqa bangigu yahay xog dadweyne oo caddaalad ah. Sidaa darteed, aad bay u fududahay qof kasta inuu helo.
#3 Maxaa dhacaya haddii aad isticmaasho lambarka dariiqa qaldan?
Isticmaalka lambarka dariiqa khaldan waxay u horseedi kartaa in hay'addaada maaliyadeed ay diido ama ku soo celiso deebaajiga IRS. IRS waxay soo saari doontaa jeeg warqad ah qaddarka lacagta marka ay hesho.
Lambarka habaynta bangigu kama mid aha 'liiska fikradaha' ee dadku marka ay samaynayaan wareejinta bangiga. Si kastaba ha ahaatee, waxay aad muhiim ugu yihiin guusha wareejintaas. Nambarada sagaal-god ah, bangiyadu si fudud ayay isu aqoonsan karaan kana fogaan karaan khaladaadka iyo dib u dhaca.
Ilaa xad, waxay ka caawisaa inay dhistaan ​​kalsoonida nidaamka bangiyada. Intaa waxaa dheer, dhigaalkaaga iyo lacag-bixinahaagu waxay si fudud ugu heli karaan meesha aad u socoto si degdeg ah. Ha iloobin, nambarada habaynta bangiyada waxay inta badan ku yaalaan dhanka bidix ee jeeggaga hoose. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa bogga bangiga iyo kuwa kale.
Bangiga Xawaaraha: Sidaad Deynta ugu Bixin Kartid 2022 -ka
Hubi qaabka 2022: Qayb ka mid ah Jeegga | Maxaan ogaadaa
Ma waxaad raadineysaa inaad qof lacag ugu dirto dibadda ama jaarka kuugu dhow akoonkaaga bangiga? Mise waxaa laga yaabaa inaad...